Imibandela yokusebenzisa | Izinzwa zobuciko - imibono yasekhaya nengadi
Mayelana Nezimo Zobuciko
I-Art Sense yincwadi ekhishwa online yokuhlinzeka ngemibono nolwazi. Zinhle futhi azinazo izinzuzo zezezimali noma ezinye izinhlangano zabezindaba. I-Art Sense ishicilela izikhangiso ezikhiqiza imali ukuthola izindleko zemvelo zomsebenzi.
I-Art Sense ayakhi inzuzo, kepha ihlose ukuqwashisa kanye nolwazi lwabasebenzisi ngezigaba eziphambili zesiza.
Ubunikazi bezithombe nezincwadi
I-Art Sense iyakha, ithola kubasebenzisi futhi iqoqe izinto zamahhala kusuka esikhaleni se-inthanethi samahhala ngaphandle kokubonisa uphawu lwe-copyright yezithombe. Izithombe ze-copyright ziyashicilelwa bese imininingwane ivikelwe futhi iphathwe ngokuhambisana nenqubomgomo yobumfihlo eshicilelwe. Isithombe ngasinye esishicilelwe sihamba ngokuqanjwa kwemifanekiso ngombala, umehluko, ikhwalithi, ukuhlela, njll., Yingakho isiginesha lifakwe. Akakufuni ukubhala.
I-Art Sense izosusa masisha noma isiphi isithombe umenzi waso angavumelani naso futhi inikeze ubufakazi obungenakuphikwa bokuba ngumlobi.
Yonke imibhalo esizeni se-Art Sense yenziwa abahleli besayithi noma inikezwe abantu besithathu ngendlela yezindikimba.
Ubunikazi bokushicilelwa kweqembu lesithathu nokuqukethwe
I-Art Sense inelungelo lokushicilela, ngokubona kwayo kuphela, izinto zakwamanye amazwe ezitholakele, futhi azinacala ngesakhiwo, kodwa kuphela ngokuqukethwe. Okuqukethwe okucasulayo, okucasulayo noma okubandlululayo ngeke kubekezelelwe kunoma yikuphi okuthunyelwe noma okuphawulayo.
Iqembu lobuciko be-Art Sense likholelwa ukuthi noma yimuphi umzamo wokuziphatha okunjalo noma umbhalo oshiywe ngababahleli uzobikwa ngokushesha ngabasebenzisi.
Ukusetshenziswa kwemibono ehlongozwayo esizeni
I-Art Sense ayinacala ekusetshenzisweni okungaphumelelanga kwemibono ehlongozwe esizeni.
I-Art Sense incoma ukuthi yilabo kuphela abanokuhlangenwe nakho okuphezulu okwenziwe yinkimbinkimbi yezindlela zokupheka ezifanele okufanele bahlanganyele ekuphekeni. Ukuhlukahluka kungenzeka ngezici eziningi emikhiqizweni nasekunambithekeni. Amayunithi akhonjisiwe ayinkomba futhi avumela ukwehluka ngezilinganiso zokufika ku-20% yenani elicacisiwe eliguqulwe kwisisindo esimisiwe kanye / noma amamitha wevolumu.
I-Art Sense ayikhuthazi ngandlela thile, kepha kunalokho - incoma ukuthi kugwenywe abantu abangenalo ulwazi olufanele, isipiliyoni noma isiqu, ukusebenza ngokusika, ukumba noma amanye amadivaysi mehendi kanye / noma kagesi namathuluzi anobungozi bokulimala.
I-Art Sense ixwayisa ukuthi ukwakhiwa kwanoma yiluphi uhlobo lwesakhiwo ngabantu ngaphandle kwemfundo edingekayo kubeka engcupheni yokulimala noma yokulimala.
I-Art Sense izokwengeza futhi iguqule lemigomo, kanye nenqubomgomo yayo Yobumfihlo nganoma yisiphi isikhathi, ukuze ihlangabezane nemvelo eguqukayo nezidingo zabasebenzisi bayo.